शिक्षा विकास र युवा
मंगलबार, आश्विन १३, २०७७ ०५:२३:३१ युनिकोड पुरानो वेबसाइट
सोमवार, असार २९, २०७७ बागेश्वरी पोस्ट
रोबट राज उपाध्याय। अस्तव्यस्त राजनीति आफैँमा आफूसंगै पैंठेजोरी खेलेको छ । जंग वहादुर राणाको पालामा सन् १८५३ मा पहिलो चोटी दरबार हाइस्कुलको स्थापना भयो ।आजको दिनसम्म आइपुग्दा शिक्षा प्रणालीमा सुधार एकदमै न्युन रहेको छ ।
नेपालको सन्दर्भमा हेर्ने हो भने हाल तीन प्रकारका विद्यालय रहेका छन् । गुरुकुल विद्यालय, निजी विद्यालय र सरकारी विद्यालय । गुरुकुल विद्यालय अहिले लोप भइसक्यो र निजी विद्यालय र सरकारी विद्यालय यथावत् नै रहेका छन् भने शिक्षा प्रणालीमा चाँहि परम्परागत शैली नै अपनाइएको छ ।
यसमा सुधारको एकदमै आवश्यकता रहेको छ । म एउटा लेख सम्झिन्छु-जब हातमा किताब लिएर गएको भुन्टेलाई देख्छु, डोल्पाकी झुमाले अस्पतालमा उपचार पाएको देख्छु, तराईकी फुलुवाको ओठमा मन्द मुस्कान देख्छु अनि सडक, संघियता र संगसंगै सिंहदरबार घरघरमा पुगेको सुन्छु । सायद शिक्षामा विकास भएको भन्न मिल्ला कि ? हाल कोराना माहामारीले निम्त्याएको विषम् परिस्थितिले विश्व समुदाय नै आक्रान्त र भयभित बनाएको छ, त्यसमा नेपाल पनि अछुतो रहन सकेको छैन ।
जसले गर्दा हाम्रो परम्परागत शिक्षा प्रणालीलाई प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष प्रभाव पारेको छ । समयको मागलाई ध्यानमा राखी शिक्षा प्रणालीलाई विश्व समुदायसंग प्रतिष्पर्धा गर्न, परम्परागत शिक्षा प्रणाली भन्दा धेरै माथि उकास्न र गुणस्तरीय शिक्षा प्रणाली प्रदान गर्न अब नेपाललाई चुनौति भनुँ या अवसर ? शिक्षामा सुधार र वैकल्पिक शिक्षा प्रणाली अपनाउन यसले महत्वपूर्ण टेवा पुर्याउँछ ।
जसरी युरोपियन मुलुकहरुमा वैकल्पिक शिक्षा प्रणाली अपनाएर शिक्षा क्षेत्रलाई गुणस्तरीय र प्रभावकारी बनाइयो त्यसैगरी वैकल्पिक शिक्षा अपनाएर नेपालको शिक्षा क्षेत्रमा पनि आमुल परिवर्तन ल्याई मुलुकले देखेको समृद्ध नेपाल र सुखी नेपालीको सपना साकार बनाउन महत्वपूर्ण भूमिका रहन्छ । सन् १९९३ मा नेपालमा पहिलोपटक इन्टरनेटको सुरुवात भयो ।
सुरुवात कालदेखि आजको दिनसम्म आइपुग्दा लगभग ३ दशक बितिसकेछ तर ग्रामीण भेगमा भने अझैँ पनि इन्टरनेटको पहुँच पुर्याउन सकेको छैन । यही सन्दर्भलाई जोड्दै गर्दा मलाई ती सुनौला अविस्मरणीय पल याद आउँछ-भर्खरै हुम्लाबाट आएको मेरो परम् मित्रले भनेका थिए-काठमाण्डौ जान त ठूलो हवाइजहाज चाहिन्छ रे ! त्यो कुरा सम्झँदा मलाई बच्चा बेलाको गफ भनुँ वा काँचो दिमाग भन्ने महसुस हुन्छ । सायद अझैँ शिक्षामा सुधार नभएको हो कि ?
डिजिटल शिक्षा आजको अपरिहार्य आवश्यकता हो भने भोलिको दिनमा शिक्षा र विकासको क्षेत्रमा जादुको छडी हो । अर्को पाटो हेर्ने हो भने विकासका पूर्वाधार पनि सिमित नै रहेका छन् । वास्तवमा विकास के हो त ? यसमा ठूलै प्रश्न चिन्ह गर्दा फरक नपर्ला । एकथरी मानिस विकासलाई समयको गति भन्दछन् भने अर्कोथरी मानिसहरु विकासलाई मानव जीवनमा आएको परिवर्तन भन्दछन् ।
नेपालको परिप्रेक्ष्यमा हिमाल, पहाड र तराईमा विकासलाई फरक–फरक दृष्टिकोणले हेरेको पाइन्छ । जस्तो-हुम्ला र जुम्लाका मानिसलाई विकास भनेको बाटोघाटो हो भने सहरमा बस्ने मानिसलाई विकास भनेको शिक्षा र रोजगारी हो । समान्यतया विकास भन्नाले सकारात्मक परिवर्तनको आधार हो । सायद यसमा कुनै विवाद छैन भन्न पक्कै नमिल्ला ।
Gunnar Myrdal का अनुसार “विकास एउटा त्यस्तो प्रकिया हो जसले अविकसित क्षेत्रको पुनः उत्थान गरी गरिवीको रेखाभन्दा माथि उकास्न मद्दत गर्दछ”। कतिपय मानिसले विकासलाई विनासको विपरितार्थ शब्दकोरुपमा पनि लिने गरेको पाइन्छ । जहाँ विनास हुन्छ त्यहाँ विकास पनि हुन्छ । यो कुरामा कत्तिको सत्यता छ त्यसमा अझैँ अलमल नै रहला । सायद विकासको गति हाम्रो देशको हकमा अलिक नपुग होकि?
युवा को हुन् त ? समान्यतया युवा भनेको आफ्नो बाल्य अवस्था पार गरी बुढौली लाग्नु भन्दा अगावैको जमात हो युवा, जो जोश, होश र सोचका साथ नयाँ परिस्थिति र नयाँ परिवेशको सृजना हो युवा । देशलाई दुख्दा मलम लगाउने, धर्ती हल्लँदा काध थाप्ने जमात हो युवा, राज्यलाई सही मार्गमा डोर्याउने संवाहक हो युवा, नयाँ सोचले आमुल क्रान्ति ल्याउने अन्वेषक हो युवा ।
प्रकाशित मिति: सोमवार, असार २९, २०७७, ०६:४१:००
जनताले चाहिँ किन ५० प्रतिशत थप भाडा तिर्ने ?
डेमोक्रेसी भर्सेज ब्युरोक्रेसी
नेपालमा सिक्नुपर्ने पाठ–न्यूयोर्कमा चिकित्सक, नर्सको सम्मान
कोरोना महामारी सॅंगै डिजिटल बैंकिङको अपरिहार्यता
साढे २ करोड डोज रसियन कोरोना भ्याक्सिन नेपालमा आउने निश्चित मंगलबार, आश्विन १३, २०७७
देशभर १५ सय १३ संक्रमित थपिए, ७ सय ३१ डिष्चार्ज
नेपालगञ्जको टंकपसेरीबाट सशस्त्र प्रहरीद्वारा अवैध सामाग्री बरामद